''Dhulka oo aan ka maqnaa shan bilood ayaan hadda ku soo laabtay'' - BBC News Somali
''Dhulka oo aan ka maqnaa shan bilood ayaan hadda ku soo laabtay''
4 Juunyo 2018
Saddex kamid ah shaqaalaha waaxda cirbixiyeennada adduunka ayaa si nabddoon kusoo laabtay kaddib markii ay hawada sare ugu maqnaayeen howlgal qaatay muddo shan bilood ah.
Image caption Baaraashuutka ay cirbixiyeenadu isticmaalayeen oo dhulka kusoo degaya
Anton Shkaplerovoo oo ah cirbixiyeen Ruushka u dhashay ah, Scott Tingle oo ka soo jeeda Mareykanka iyo Norishige Kanai oo isagana reer Japan ah ayaa ka degay dalka Kazakhstan, waxayna isticmaalayeen qalab baarashuud ah oo leh midabo gaduud iyo casaan ah.
Image caption Si nabddoon ayuu qalabkooda hawada uga soo degay
Sawirro ay soo qaaday waaxda cirbixiyeenada Ruushka ayaa muujinaya diyaaradaha qumaatiga u kaca oo dul wareeganaya baarashuutka cirbixiyeenada marka uu caga dhiganayay halkaasi, xilli ay saacaddu ku beegnayd wakhtiga dalkaasi 18:39.
Image caption Mid kamid ah cirbixiyeenada oo la caawinaya sii looga soo saaro qalabka uu ku dhex jiray, 3-dii Bisha June ee sanadkan 2018-ka
Anton Shkaplerov, oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee laga soo bixiyo ayaa yiri " waxaan samaynay isku day wanaagsan , waan ku faraxsanahay waxa inoo hergalay, sidoo kale waxaan ku faraxsanahay in si nabad ah dhulka uga soo laabto, waxaan sidoo kale ku faraxsanahay cadceedda jirta hadda".
Image caption Scott Tingle oo kamid ah cirbixiyeenada
Scott Tingle ayaa isagana noqday qofkii labaada ee kor loo qaado isagoo faraxsan oo dhoola caddaynaya.
Image caption Norishige Kanai oo u dhashay dalka Japan
Booliiska Hindiya oo xiray tuugo ‘cirbixiyeeno’ iska dhigay
Image caption Waa goobta ay kusoo dageen saddexda cirbixiyeenno
Dhammmaantood saddexda cirbixiyeen, waxay ku fadhiyeen kuraas iyagoo lagu huwiyay busto ay ka muuqata farxadda ah inay dib ugu soo laabten dhulka.
Image caption Waa mid kamid ah qalabka ay isticmaalaan shaqaalaha waaxda cirbixiyeenada adduunka
Cirbixiyeenada kala ah Tingle iyo Kanai ayaa u safri doona caasimadda Kazakhistan ee Karaganda ka hor inta aysan u sii safrin magaalada Houston ee gobolkaTexas ee dalka Mareykanka.
Shkaplerov wuxuu isagana dib ugu laabanayaa magaalada Moscow isagoo wata kubadda lagu cayaarayo koobka adduunka ee dalkaasi ka dhacaya.
Sawirro ay soo bandhigeen waaxda Cirbixiyeenada adduunka ayaa muujinaya Shkaplerov iyo saaxibadiisa kale oo tijaabinaya kubadda.
Saddexda nin waxay ka shaqaynayeen tijaabooyin dhowr oo Sayniska ah intii ay ku guda jireen socdaalka hawada sare.